Tallaabo adag oo laga qaadi doono ganacsatada dhuxusha ka dhoofisa Somalia… – Hagaag.com
Tallaabo adag oo laga qaadi doono ganacsatada dhuxusha ka dhoofisa Somalia…
Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshaddaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay tallaabo adag ka qaadi doonto ganacsatada ka dhoofisa dalka dhuxusha.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay soo saarista shuruuc adag oo looga hortagayo dhoofinta dhuxusha oo hore dalka looga mamnuucay.
”Waxaan horgeyn doonaa dhowaan Golaha Wasiiradda iyo Baarlamaanka sharciyo xadidaya dhoofinta dhuxusha iyo ciqaabta kuwa ka ganacsadda.”ayuu yiri Wasiirka Ganacsiga.
Maxamed Cabdi Maareeye Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya dhuxusha si joogto ah loo dhoofiyo in ay keentay in dowlad xooggan oo dalka oo dhan Kontarooli karta in aysan dalka ka jirin.
Dhowaan ayaa warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay waxa ay ku sheegtay in si joogta ah loogaga dhoofiyo dekeda Kismaayo dhuxusha.
Maamulka Jubbaland oo khilaaf uu kala dhexeeyo dowlada federalka ayaa lacago faro badan oo canshuur ah waxa uu ka helaa dhoofinta dhuxusha.